ⓘ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မော်တော်ယာဉ်များ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောယာဉ်များကို စတင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အိန္ဒိယမော်တော်ယာဉ် ဥပဒေအမှတ်၈ ကို ထုတ်ပြန်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင် အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ပြီး ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် လုပ်သားပိုင် အငှားယာဉ်များ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း၍ ၁၉၀၆ခုနှစ်ဥပဒေ ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အငှားယာဉ်နည်းဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ် ထရော်လာဂျီကားများ စ၍ အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အဆိုပါ ယာဉ်များရောက်ရှိလာပြီးနောက် အများပြည်သူလမ်းများပေါ်တွင် ပြေးဆွဲမောင်းနှင်လာသည်နှင့်အမျှ မော်တော်ယာဉ်များကို မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်တွင် မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကို ရန်ကုန်ရဲမင်းကြီးက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ခရိုင်များတွင် ခရိုင်ရဲဝန်ထောက်က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှစ၍ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း စတင်ခဲ့သည်။၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ မော်တော်ယာဉ်များ ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်သွားလာမှုဆိုင်ရာများအား ကြီးကြပ်မှုများကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ခဲ့ရာ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ၁၉၆၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင် ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်လုပ်ငန်းများကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၇ရက်နေ့မှစ၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သည်လည်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အမည်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ဝန်ကြီးဌာန ၃ခုခွဲ၍ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၁ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီး ဌာနအား ဖျက်သိမ်း၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန အဖြစ် ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် သွတ်သွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၇ရက်နေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေအမှတ်-၅၅အားထုတ်ပြန်သည်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန တို့အား ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအမည်ကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ လက်အောက်ခံဦးစီးဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
1.1. သမိုင်း​ကြောင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန
၁၉၇၂ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ရပ်ကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဟု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ဗဟိုပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့်ဌာနတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ စစ်ဆေးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းအင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနများကိုပူးပေါင်း၍ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန ဟု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန၃ခုအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီး ဌာနကို ဦးစီးဌာန၂ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၅/၉၂၂၁ နဝတဖြင့် ဦးစီးဌာနတစ်ခုမှာ ပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာန အမည် ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်လည်းကောင်း၊ ဦးစီးဌာနတစ်ခုမှာ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အမည်ဖြင့် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် လည်းကောင်း အသီးသီး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှစ၍ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အချို့ကို ဝန်ကြီးရုံးအသစ်တွင်သွတ်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ ကျန်အင်အားကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်ပေါင်းစပ်၍လည်းကောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအား ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊"လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန"အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ဤဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အရာထမ်း၂၈၀ဦး၊ အမှုထမ်း၂၇၁၀ဦး၊ စုစုပေါင်း ၂၉၉၀ဦးဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိအရာထမ်း၁၅၂ဦး၊ အမှုထမ်း၁၃၅၃ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၅၀၅ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဤဦးစီးဌာန၏အဓိက ရည်မှန်းချက်တာဝန်မှာ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး Road Safety ဖြစ်သည်။
ဤဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် ၄ ရပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
4. ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း
Wikipedia: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန